Ukubuyekezwa Kwezinzuzo Zezempilo ZeNew Nootropic Coluracetam Enamandla Ebuchosheni
Ukubuka konke kwe-Coluracetam
I-Coluracetam eyaziwa nangokuthi i-BCI-540 noma i-2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2, 3-dimethyl-5, 6, 7, 8-tetrahydrofuro2, 3-b quinolin-4-yl) ngaphambili eyaziwa ngokuthi iMKC-231. I-Coluracetam iyi-nootropic entsha yokwenziwa evela emndenini we-racetam, kepha i-nootropic eqinile ekwakheni inkumbulo nokusebenza okujwayelekile kokuqonda.
IColuracetam ngokuyisisekelo, ingukudla ukwengeza etholwe ku-piracetam. IColuracetam yaqala ukwenziwa yiMitsubishi Tanabe Pharma Corporation ngo-2005. Bayihlakulela njengokwelashwa kwesifo i-Alzheimer's. Yize imiphumela yokuqala ikhombise amandla athile, yehlulekile ukufinyelela emaphethelweni.
Kamuva ilayisense ladluliselwa ku-BrainCells Inc. eliyithuthukisele ukwelashwa kwesifo esikhulu sokudangala (MDD) nesifo sokukhathazeka okujwayelekile (GAD). Bafinyelele esigabeni 2a sezifundo zomtholampilo ezibike ezinye zezinto ezinamandla ekusizeni iziguli ekuphazamisekeni okukhulu kokudangala kanye nasekukhathazekeni.
Ngeshwa, iBrain Cells Inc. ayikukhulisanga ngokuphelele futhi nenkampani yavalwa ngonyaka ka-2014. IColuracetam selokhu yatholakala ukuthola amalayisense kusukela ngo-2012.
Ngaphandle kwakho konke lokhu, i-coluracetam ibhekwa njengento enamandla amakhulu i-nootropic indawo. Imvamisa isebenza ngokushesha njengoba ingafinyelela amazinga aphezulu kakhulu egazini kungakapheli imizuzu engama-30 yokuphuzwa. Kodwa-ke, amazinga ancipha kungakapheli amahora amathathu okusetshenziswa okusho ukuthi umuntu uzothola izinzuzo eziphezulu kungakapheli amahora amathathu wokusebenzisa.
Njengamanye ama-racetams, i-coluracetam inyusa amazinga e-acetylcholine, noma kunjalo indlela esebenza ngayo ivelele. I-Coluracetam ngokuyinhloko ithuthukisa inqubo ephezulu yokuhambisana ne-choline uptake (HACU) ngaleyo ndlela ikhulisa ukuguqulwa kwe-choline ku-acetylcholine. I-neurotransmitter, i-acetylcholine, ihlotshaniswa nomsebenzi wokuqonda nokukhumbula, yingakho ikhono le-coluracetam njengekhompiyutha ye-nootropic.
Ezinye izinzuzo ezihambisana ne-coluracetam zibandakanya ukuthuthukisa umbono, ukuthuthukisa ukuqonda nokukhumbula mahhala, ukukhulisa imizwa, ukukhulula ekukhathazekeni nasekucindezelekeni kanye nesakhi sokwakha umzimba.
I-Coluracetam itholakala kusuka kumatafula f, amaphilisi noma uketshezi. Ingathathwa ngomlomo noma ngokwezifiso. I-Coluracetam iyi-nootropic enenqubekela-phansi ngakho-ke ukumuncwa okusheshayo kufanele isetshenziswe kanye namafutha / amafutha anempilo afana ne-olive olive.
Le nootropic isebenza ngaphakathi kwesikhashana esifushane njengoba ifika ezingeni eliphakeme ku-plasma kungakapheli imizuzu engama-30 ngemuva kokuphatha.
I-Coluracetam iyinhlangano elenziwe nge-syntotle no-soluble nootropic emndenini we-racetam. Coluracetam owaziwa nangokuthi I-BCI-540 phambilini ibibizwa ngeMKC-231.
Yize eyisakhiwo esisha esihle, izinzuzo zekoluracetam nootropic ziyathembisa. Kukholelwa ukuthi kunikeza izinzuzo ezinkulu ekwandiseni inkumbulo, ukufunda, ukudambisa ukukhathazeka, ukuphazamiseka okukhulu komoya okucindezelayo kanye nokwenza ngcono umbono.
Indlela yokusebenza ye-Coluracetam
Ngabe isebenza kanjani i-coluracetam ebuchosheni?
Njengamanye ama-racetam, i-coluracetam izuzisa ubuchopho ngokuthinta i-choline futhi kamuva ne-acetylcholine ngezindlela ezihlukile. Ucwaningo olwenziwe kuze kube manje luphakamisa ukuthi imiphumela ye-coluracetam ebuchosheni ngokusebenzisa izindlela ezintathu eziyinhloko. Lezi zinqubo zesenzo se-coluracetam zichazwe ngezansi;
(1) Ukusekela ukuthathwa kwe-choline ephezulu kakhulu
Ama-Nootropics esigabeni se-racetam baziwa ngokuheha ukukhiqizwa kwe-acetylcholine ngokuvuselela ama-receptors abhekelekayo. Kodwa-ke, i- indlela yokusebenza ye-coluracetam ihlukile ngoba ithuthukisa ukukhiqizwa kwe-acetylcholine ngokuqhakambisa ukuthobeka okuphezulu kokuqina kwe-choline (HACU).
Uhlelo lwe-HACU luyindlela ephakathi yokuhambisa i-choline ebuchosheni. Ngokuyisisekelo isinyathelo esinqunyelwe isilinganiso senqubo yokukhiqiza i-acetylcholine. I-Acetylcholine yi-neurotransmitter ehambisana nememori, ukufunda nokusebenza kwengqondo okujwayelekile.
I-Coluracetam Izithako kwandisa izinga lapho i-choline ithunyelwa ebuchosheni okuholela ekukhiqizweni okuningi kwe-acetylcholine. Ikhulisa ngokukhethekile i-CHT1, i-high-affinity choline transporter, ngakho-ke iholela ekutholakaleni okuphezulu kwe-choline ukuze ithathwe.
Uma kwenzeka kwephuka i-HACU, umuntu uhlangabezana nalokho okuchazwa njengomphumela wenkungu yobuchopho kanye nezinkinga ngememori nokufunda. I-Coluracetam iyawathokozisa ngokwengeziwe amazinga e-choline eplasma yegazi esiza uhlelo lwe-HACU lusebenze kahle, noma ngabe amanye ama-neurons alimala.
Ukukhiqizwa okukhiqizwayo kwe-acetylcholine kuma-neurons kusiza ukukhulisa inkumbulo emfushane neyesikhathi eside, ukufunda, kanye nekhono elingcono lokuthatha izinqumo.
(2) Ukwenza ngcono amandla we-AMPA
Ucwaningo luveze ukuthi i-coluracetam ingakhuphula amandla we-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA) potentiation. Ama-receptors e-AMPA athonywe yi-glutamate nayo ethinta amandla wesikhathi eside (i-LTP) akha isisekelo sokufunda nokukhumbula.
Njengamanje, abakwaSerotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) yizo izidakamizwa ezisetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kwemizwa nokudangala. Lawa ma-SSRI, kepha, athinta amazinga we-serotonin ebuchosheni obangela imiphumela emibi eminingi.
I-Coluracetam iza elusizo njengendlela yokwelapha ukuphazamiseka kwengcindezi nokukhathazeka ngokuthuthukisa umsebenzi we-glutamate ngakho-ke akubangeli miphi imiphumela emibi ehlobene ne-serotonin.
(3) Ukuvikela ama-receptors e-NMDA ekulimaleni kobuthi be-glutamate
Enye indlela yokusebenza okungenzeka ye-coluracetam yikhono lokuvikela ama-receptors e-N-Methyl-D-aspartate (NMDA) avela kubuthi be-glutamate. I-receptor ye-NMDA iyi-receptor ye-glutamate kanye ne-protein yesiteshi se-ion eyenzeka kumaseli ezinzwa. I-receptor ye-NMDA ibamba iqhaza elibalulekile ekulawulweni kwe-synaptic plasticity nemisebenzi yememori.
Ukulimala kuma-receptors e-NMDA kuxhunyaniswa nokuphazamiseka kwengqondo okubalulekile njengokushaywa unhlangothi, ukulimala kobuchopho obuhlungu, isifo se-Alzheimer's phakathi kwezinye izifo zobuchopho.
Ucwaningo lweColuracetam lukubona njengamandla amakhulu i-nootropic i-ejenti ehambisana nokuhlangenwe nakho okuhle kwe-coluracetam ngabasebenzisi bayo '. IColuracetam iyisithuthukisi esithokozisayo sokuqonda ngenxa yendlela yayo yokusebenza evelele. Kodwa-ke, njengoba kuyinkimbinkimbi entsha kudingeka izifundo eziningi kubantu ukuqinisekisa izinzuzo ze-coluracetam ezifakiwe.
Ngezansi kukhona izinzuzo ze-coluracetam ukuthi umuntu angathola kusuka ekusetshenzisweni okungaguquki futhi okufanelekile kwe-coluracetam;
(1) Thuthukisa Inkumbulo Nokufunda
I-Coluracetam inyusa ukukhiqizwa kwe-neurotransmitter, i-acetylcholine ehambisana nokufunda nememori.
Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi i-coluracetam ingakhulisa inkumbulo nomsebenzi oqondayo kumagundane. Kodwa-ke, izifundo azikenziwa nezifundo zabantu kepha imiphumela ingahle ifane.
Isibonelo, ocwaningweni lwamagundane anokushoda kwenkumbulo, ukuphathwa ngomlomo kwe-coluracetam ku-1-10mg / kg kwatholakala ukuthuthukisa inkumbulo ngaphandle kokubanga imiphumela emibi emibi.
Ukubuyekezwa kweColuracetam kukhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi ithuthukise inkumbulo yesikhathi esifushane neyesikhathi eside.
(2) Thuthukisa Ukuqondisisa Ukufundwa Kakhulu nokukhumbula Okukhululekile
I-Coluracetam Izithako ingathuthukisa inkumbulo yesikhashana, ithuthukise ukugxila kanye nokukhumbula kwamahhala. Lezi zakhiwo zivumela abafundi nanoma ngubani osendaweni yokuncintisana ukuthi bathuthukise ukusebenza kwabo.
Eziningana nakho kwe-coluracetam ngabasebenzisi ngabodwa bakhombisa amandla we-coluracetam ukukhulisa ukusebenza ngokufunda ukuqonda okungcono kanye nokukhumbula kwamahhala kwezinto ezifundwayo.
(3) Ukuthuthukiswa Kokuqonda Kwesikhathi Eside
IColuracetam kuthiwa inomthelela ohlelweni lokulawula ukuthathwa kwe-choline ngaleyo ndlela ithuthukisa umsebenzi wokuqonda isikhathi eside ngemuva kokuphathwa komthamo ophansi we-coluracetam.
(4) Yehlisa Ukwelapha-Ukumelana Nokudangala
Ucwaningo lukhombisa ukuthi izithasiselo ze-coluracetam ziyindlela yokwelashwa engabhekelwa kubantu abamelana nama-anti-depressants.
Isivivinyo sesigaba 2a senziwa yiBrainCells Inc., ekuphatheni kweziguli kuma-anti-depressants ukuze kuvivinywe ukusebenza kwe-coluracetam ngokumelene nokukhubazeka okukhulu (MDD) kanye nokukhathazeka ngokujwayelekile (GAD). Imiphumela yokuqala yakhombisa ukuthi i-coluracetam ngo-240mg / ngosuku ibiphathelene ne-MDD ne-GAD.
(5) Ukuphakanyiswa okungenzeka kweNeurogene
I-Neurogenesis ngokuyinhloko inqubo lapho amaseli amasha obuchopho enziwa ngayo. Le nqubo ibalulekile ekusebenzeni kwengqondo kanye nokulimala kwengqondo okujwayelekile.
I-Coluracetam iyakwazi ukukhuthaza i-neurogeneis kodwa indlela engaphansi yesenzo ayicacile. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kungahle kuhambisane nekhono le-coluracetam ukwandisa amazinga e-acetylcholine futhi ikakhulukazi kwi-hippocampus.
(6) Ingathuthukisa ukukhubazeka kwengqondo
I-Coluracetam inyusa umsebenzi we-acetylcholine ongasiza abantu abahlupheka iSchizophrenia lapho i-enzyme ebandakanyeka ekutholakaleni kwe-acetylcholine imvama khona.
Kungaphinde futhi kuthuthukise ukufunda kubantu abagula kusuka kwezinye izinto ezikhubazekile zensimbi njengesifo se-Alzheimer's.
(7) Kwangathi Ungathuthukisa Umbono
IColuracetam iyathakazelisa i-nootropic inhlanganisela engagcini nje ngokukhulisa ukuqonda kepha futhi engakhuphula nombono wakho ngokuthuthuka kokubona kombala, ukuqashelwa kobuhle okungcono nokubona okuthuthukile. Kungakhuthaza ukukhula kwemizwa kubantu abathintekayo yisifo esiwohloza i-retina.
Abasebenzisi be-coluracetam banolwazi oluhlukile imiphumela ye-coluracetam kufaka phakathi imibala egqamile, umehluko omkhulu, ukugxila okubukhali ekwakhekeni namalambu kukhanya ngokwengeziwe.
(8) Ukuthuthuka kwesibonakaliso se-Angryable Bowel Syndrome
I-irritable bowel syndrome (IBS) yisifo esikhulu samathumbu esijwayelekile esenzeka ngenxa yokulawulwa kabi kwe-choline transporter 1 (CHT1).
Ucwaningo lwango-2018 lukhombisa ukuthi i-coluracetam iyakwazi ukulawula i-CHT 1 molecule yingakho ikhulula izimpawu uma ngabe i-bowel syndrome ingahambi kahle.
(9) Ukusetshenziswa kokuzijabulisa kwe-Coluracetam
I-Coluracetam iyisithuthukisi esihle semood futhi inikezela ukuzizwa okuphumuzayo kancane kancane. Kutholakale ukuthi kusebenze ama-hormone wokukhula ngenxa yalokho alungele ukwakha umzimba. Kodwa-ke, ayikhonjiswa njengento ekhuthaza amandla ngakho-ke kufanele isetshenziswe ngesikhuthazi semiphumela emihle kakhulu.
I-Coluracetam Vs aniracetam, i-fasoracetam, i-pramiracetam nePiracetam. Uyini umehluko?
(1). IColuracetam vs Aniracetam
Bobabili i-coluracetam ne-aniracetam bangabomndeni we-racetam. Kokubili izithasiselo ze-nootropic eziqinile. I-Aniracetam yatholakala okokuqala ekuqaleni kweminyaka yo-1970. I-Aniracetam iyaziwa ukuthuthukisa inkumbulo nemizwa, inciphise ukukhathazeka nezimpawu zokucindezelwa kanye nokwenza ngcono ukugxila.
Ngambili kokubili coluracetam ne-aniracetam kuthinta amazinga e-acetylcholine ebuchosheni bakho, ayahluka ngendlela athinta ngayo. I-Aniracetam iholela ngqo ekukhulisweni kwe-acetylcholine enkulu ngenkathi inqubo eyinhloko yokusebenza kwe-coluracetam ngokusebenzisa umthetho wenqubo ephezulu yokutholwa kwe-choline eholela ekutholakaleni okukhulu kwe-choline nasekuguqukeni ku-acetylcholine.
Ngaphezu kwalokho, i-coluracetam ibonakale iholela ekuqhathaniseni okukhulu futhi ithuthukisa imininingwane ngenkathi i-Aniracetam iholela ekugcwalisweni kombala okwengeziwe.
Yize i-aniracetam futhi i-coluracetam nootropics kukhona izithuthukisi zesimo sezulu, iColuracetam isithuthukisi semood esingcono kune-aniracetam.
Ngaphezu kwalokho, abanye abasebenzisi be-aniracetam babika ubuhlakani obuthuthukisiwe. I-Coluracetam ngakolunye uhlangothi ithuthukisa umbono.
(2). IColuracetam vs iFasoracetam
I-Fasoracetam yi-nootropic entsha emndenini we-racetam. Kwenziwa njengokwelashwa okungaba khona noma i-Attention Deficit Hyperacaction Disorder (ADHD) ezinganeni.
Njenge-coluracetam, iFasoracetam iyi-nootropic yengqondo engaba khona futhi ethuthukisa inkumbulo nomsebenzi ojwayelekile wokuqonda. Zombili zandisa ukuthathwa kwe-choline okusetshenziselwa ukwakheka kwe-acetylcholine.
Enye indlela evelele ye-fasoracetam yesenzo amandla ayo okukhuphula ama-GABAb receptors. Ama-GABA receptors ahambisana nokufunda, ukuthambisa imiphumela esiza ekuqedeni ukukhathazeka nokudangala kanye nokwenza ngcono ukulala.
Lama nootropics amabili angaba nemiphumela efanayo. Kodwa-ke, isici esivelelayo ukuthi, i-coluracetam ikhiqiza i-acetylcholine ngesilinganiso esiphakeme kune-fasoracetam. Ngaphezu kwalokho, amandla we-coluracetam ekwandiseni imizwa afakazelwe kahle ngenkathi lelo le-fasoracetam lingafakazelwa ngokuphelele.
Njengamanye ama-racetams, iFasoracetam idinga ukuthi isetshenziswe kanye nomthombo omuhle we-choline njenge-Alpha GPC. Kodwa-ke, kunzima ukuyifaka kanye nezinye izithasiselo. Kuyathakazelisa ukuthi isitaki se-coluracetam fasoracetam ukuphela kwesitaki esinconyiwe.
(3). I-Coluracetam vs Pramiracetam
I-Pramiracetam ingenye ye-nootropics enamandla kakhulu evela emndenini we-racetam. Inamandla amakhulu okuthuthukisa inkumbulo. Ngokungafani nezinye izinkundla zokulwa, ezingasetshenziswa kakhulu kwizifundo ezinempilo, ama-pramiracetam angasetshenziswa kubantu abanempilo futhi.
Njenge-coluracetam, i-pramiracetam inyusa ama-neurotransmitter ebuchosheni. Kodwa-ke, ngokungafani ne-coluracetam noma amanye ama-racetam athinta ama-neuron receptors athile, i-pramiracetam ingabathinta bonke futhi ithonye i-hippocampus.
Ngenkathi bobabili bengathuthukisa inkumbulo, i-pramiracetam futhi inikezela ngezinzuzo zokuba ngumvuseleli. Kodwa-ke, i-coluracetam iphinde inikeze inzuzo eyengeziwe evela ku-pramiracetam yokudambisa ukukhathazeka kanye nokufukula kwemizwa.
(4). IColuracetam vs Piracetam
I-Piracetam iyi-nootropic yokuqala yokwenziwa futhi eqinile phakathi kwamanye ama-nootropics esigabeni se-racetam. IPiracetam iyisithuthukisi sokuqonda esisebenzayo ikakhulukazi kubantu asebekhulile kanye nabantu abaphila nokuqonda kwengqondo. Kodwa-ke, kungenzeka kungabi lusizo kubantu abaphilile.
Ngenkathi bobabili i-piracetam ne-coluracetam zikhuphula izinga le-acetylcholine ebuchosheni indlela yabo yokusebenza ihlukile. I-Piracetam yenza ama-receptors e-acetylcholine azwele kakhulu nge-acetylcholine, kuyilapho, i-coluracetam ikhulisa ukuguqulwa kwe-choline ku-acetylcholine ngokuthonya inqubo ephezulu yokuhambelana kwe-choline.
Imithamo ye-Coluracetam, Isitaki, isengezo
(1) Umthamo weColuracetam
Ukuphathwa kokudla nezidakamizwa (i-FDA) kubheka i-coluracetam namanye ama-nootropics e-racetam njengezidakamizwa ezintsha ezingagunyaziwe ngakho-ke ayikho isilinganiso esilinganiselwe se-coluracetam esichaziwe. Kulokhu okunconyiwe umthamo we-coluracetam izotholakala ezifundweni zemitholampilo zabantu kepha ngeshwa kuphela ucwaningo olulinganiselwe olwenziwe nezifundo zabantu.
Yebo, konke kulahlekile njengoba ukubuyekezwa okuningi kwe-coluracetam kusuka kubasebenzisi abathile kusiza ekutholeni umthamo ofanele we-coluracetam. Umthamo osebenzayo ulele phakathi kwe-5-20 mg ngosuku, noma kunjalo, ukuqhathanisa nokuphathwa kwe-coluracetam ngomlomo vs ukuphathwa okulingana-ke umthamo ungalungiswa ngokufanele.
Ekukhetheni umthamo we-coluracetam ngomlomo nangaphansi, umthamo ongaphansi kufanele ube ophansi. Ukuphathwa kwe-sublingual ngokuyisisekelo kufaka ukubeka i-coluracetam ngaphansi kolimi futhi ukuvumela ukuthi kuncibilike ngesikhumba. Lokhu kuvumela i-coluracetam nootropic ukuthi igeleze ngqo egazini ekhulisa imiphumela ye-coluracetam.
Iningi labasebenzisi libika umthamo we-coluracetam we-20-80 mg nsuku zonke othathwa ngemithamo emibili, enye ekuseni kakhulu kanti enye ntambama.
Kodwa-ke, umthamo omkhulu we-coluracetam ophakeme we-100 mg othathwe kathathu nsuku zonke uzodingeka ekwelapheni ukukhubazeka okukhulu kanye nokuphazamiseka okujwayelekile kokukhathazeka. Umthamo ofinyelela ku-240 mg kathathu ophathwe nsuku zonke usetshenzisiwe ekuhlolweni ngaphandle kwemiphumela emibi emibi.
Njenganoma yisiphi isidakamizwa noma isengezo sokudla, ngaso sonke isikhathi qala ngethamo elisebenzayo eliphansi kakhulu bese ukhuphuka kancane kancane njengoba umzimba wakho ungadinga. I-Coluracetam kufanele ithathwe ngomthombo omuhle we-choline ukubhekelela ukusilela kwe-choline okungase kuholele ebuhlungu bekhanda.
(2) I-Coluracetam Stack
Ama-Racetams nezinye izithasiselo ze-nootropic ziveza imiphumela engcono uma zihlanganiswa nezinye izithasiselo. Ama-Racetams ikakhulukazi adinga ukuthathwa kanye nomthombo omuhle we-choline ukugwema imiphumela ehlotshaniswa ne-choline enganele ebuchosheni njengobuhlungu bekhanda. IColuracetam akuyona eyehlukile.
Uma ubheka i-coluracetam alpha GPC nootropic stack, umthamo ka-300-600 mg nsuku zonke ube ofanele ngenye indlela uma ungaba ngu-250-750 mg ngosuku lwe-CDP choline uzoveza imiphumela engcono uthatha no-10-20 mg we-coluracetam nsuku zonke.
I-Coluracetam ifaka kahle izithasiselo eziningi kufaka phakathi, phenylpiracetam, tianeptine, noopept, modafinil, pramiracetam, piracetam kanye oxiracetam phakathi kokunye ama-nootropics.
Njengoba ukufaka i-stacking kungabanzi kakhulu njengoba i-coluracetam ihlinzeka ngendawo yokuhlolwa, cabanga ngesitaki esizokhulisa kakhulu ukusebenza kwakho kwengqondo ngenkathi kuvusa amandla amakhulu engqondo nawomzimba kanye nokusilela kwe-choline. Ezinjengokufakwa kwesitaki kufaka isitaki se-coluracetam oxiracetam, i-coluracetam fasoracetam isitaki phakathi kwabanye.
Isibonelo sesitaki se-coluracetam oxiracetam ephelele
I-20 mg coluracetam - isithuthukisi sokuqonda esiyinhloko
I-200 mg i-oxiracetam - isinikeza izinzuzo ze-synergetic nge-coluracetam
Ama-200 mg we-caffeine- ukwenza njengomvuseleli
I-400 mg L-Theanine-ukukhuthaza ukuphumula
I-300 mg yomthombo we-choline njenge-Alpha GPC isengezo
(3) Isengezo seColuracetam
Coluracetam isengezo ingatholakala ifomu lendlu ye i-coluracetam powder, uketshezi ngokuvamile uthathwa kalula ngokweqile futhi njengamaphilisi we-coluracetam.
Kunezindlela eziphambili zendlela i-coluracetam engathathwa ngayo ie coluracetam ngomlomo vs sublingual ukuphatha. Ukuphathwa kwe-sublingual kusebenza kakhulu kunokukhuluma ngomlomo. Lapho isengezo sibekwa ngaphansi kolimi singena ngqo egazini yingakho ukumunca ngokushesha futhi kulula.
I-Coluracetam idume ngomsebenzi wayo oyinhloko ekwandiseni inkumbulo nasekufundeni kanye nezinye izinzuzo ezinjengokuthuthukisa umbono, ukudambisa ukukhathazeka kanye nokuphazamiseka okukhulu komoya kanye nokwelapha i-bowel syndrome.
I-Coluracetam isebenza ikakhulukazi ngokwandisa amazinga e-acetylcholine ebuchosheni. Enye indlela yokungezwa kwe-coluracetam ukuthatha ukudla okune-choline okunamaqanda, isibindi, inyama yenkomo nenyama yenkukhu, i-broccoli phakathi kwabanye.
Iningi labasebenzisi be-coluracetam liyifaka ngomthombo omuhle we-choline njenge-CDP-Choline noma i-Alpha-GPC yokuthuthukisa imiphumela ye-coluracetam nemiphumela emibi engezansi engabakhona.
I-Coluracetam iyi-nootropic enganyibiliki kahle ngakho-ke idinga ukuthathwa ngamafutha aphilile njengamafutha kakhukhunathi angatholakalanga, noma owoyela owengeziwe we-olive olive ukuze kufakwe kangcono.
Imiphumela emibi nokuhlangana
Imiphumela emibi yeColuracetam
I-Coluracetam iyindawo ephephile futhi evunyelwe kahle ye-nootropic esetshenziswe ngaphandle kokubangela imiphumela emibi. Kodwa-ke, eminye imiphumela emibi emincane nokulinganiselwe iye yabikwa. Imiphumela ye-coluracetam imvamisa yenzeka lapho kuba ne-overdose.
Lokhu kungenzeka kwemiphumela emibi ye-coluracetam ifaka;
Ubuhlungu bekhanda: Lokhu kuvame kakhulu ngawo wonke ama-racetam ngenxa yokuthi ukwanda kokuguqulwa kwe-choline ku-acetylcholine. Ukungabi namandla kwe-choline ebuchosheni kuvame ukuphumela ekhanda ezingxenyeni zobuchopho. Abanye abasebenzisi be-coluracetam babike ukuphathwa ikhanda. Lokhu kulungiswa ngokufaka isitaki ngomthombo omuhle we-choline futhi kwehlise nomthamo.
Inkungu yobuchopho: lokhu kumane kusho ukuntuleka kokugxila nokudideka. Abanye abasebenzisi be-coluracetam babike umuzwa wokudideka kanye nokuntuleka kokugxila. Kodwa-ke, lokhu kuvame ukunyamalala ngokusetshenziswa okungaguquki kwe-coluracetam ku-dosage efanele.
Ukwehla kwemizwelo: Lokhu kungukuphikisana kwezinzuzo zezithasiselo. Ngenkathi kwaziwa njengesithuthukisi semizwa abanye abasebenzisi be-coluracetam bezwa imizwa ephansi ekuqaleni futhi ikakhulukazi ngemithamo ephezulu. Ngenhlanhla, ukwehlisa umthamo kungasiza ekuthuthukiseni imizwa kanye nokuyisebenzisa ngokuthuthukisa imizwa engcono.
Isicanucanu: lapho i-coluracetam ithathwa ekudakwiseni ngokweqile umuntu angaba nesicanucanu.
Ukulala isikhathi sasemini: I-overdose inganciphisa izinga lakho lokuqapha ngisho naphakathi nosuku.
Eminye imiphumela emibi ye-coluracetam ephawulwe ukungabekezeleleki, ukukhathazeka, imicabango yokuzibulala, nokuphazamiseka kokulala ebusuku.
Izindaba ezimnandi ukuthi yonke le miphumela ye-coluracetam iyagwemeka;
Isebenzisa ngomthombo we-choline,
Isebenzisa umthamo onconyiwe,
Ukuthatha isengezo ekuseni nantambama,
Ukuthatha amanzi anele.
Abanye ukusebenzisana kwe-coluracetam sekubikiwe ngakho-ke umuntu kufanele aqaphele kakhulu lapho ecubungula lo mbhalo. Ukukhuluma nodokotela wakho kuyalulekwa kakhulu ukuthi uhlale unolwazi nganoma yikuphi ukuhlangana kwezidakamizwa nakukhetho lokungezelelwa kokudla.
Ngezansi kokunye kokusebenzisana;
IColuracetam ingahle ithikameze ukusebenza kwezidakamizwa ze-anticholinergic, kubandakanya nemithi kaParkinson, iBenadryl, namanye ama-antipsychotic.
I-Coluracetam iyisengezo se-cholinergic ngakho-ke ingangeza imiphumela yezidakamizwa ze-cholinergic, njengezidakamizwa ze-Alzheimer's ne-glaucoma.
Kungathonya nezidakamizwa ze-NMDA receptor, njengomuthi wokukhwehlela kanye ne-anesthetics.
Ucwaningo lwezokwelapha kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi
Ucwaningo lomtholampilo lweColuracetam
Izilingo zomtholampilo wesintu eziphathelene ne-coluracetam zikhawulelwe esivivinyweni esisodwa esenziwe yiBrain Cells Inc. lolu cwaningo oluthinte abantu abangaphezu kwe-100 abanenkinga enkulu yokudangala nokukhathazeka okubanzi. Imiphumela yokuqala iphakamisa ukuthi i-coluracetam yayinokuthile okungenzeka kube khona, kodwa abakwazanga ukuthuthukisa isengezo.
Yize i-coluracetam iba yicotropic entsha kahle enezifundo ezinqunyelwe zabantu abanye abasebenzisi abathile babika ezinye izinzuzo kanye nemiphumela emibi. Okunye okuhlangenwe nakho kwe-coluracetam okubikwa ukuthi;
Ukuqonda okuthuthukile kokufunda nokukhumbula mahhala
Noma kunjalo, ezinye Ukubuyekezwa kwe-coluracetam iveze eminye imiphumela emibi:
Ukuphazamiseka kokulala ebusuku
Ngenxa yokuntuleka kwesayensi kokuxhaswa kwemiphumela engehla ye-coluracetam, sikucebisa ukuthi uthintane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokuthatha izithasiselo.
Ngubani ongasebenzisa i-coluracetam?
I-Coluracetam powder noma isisombululo sihle kuwo wonke umuntu ongathanda ukuvuna izinzuzo zalo ezahlukahlukene. Kodwa-ke, abantu abanezinkinga ezithile zezokwelapha ezifana nesifo sikaParkinson, futhi nabesifazane abakhulelwe bayalulekwa ukuthi bangasebenzisi lesi sengezo.
Abantu abahlushwa ukuntuleka kwememori ngenxa yezizathu ezinjengobudala nokugula okufana nokuphazamiseka kweSchizophrenia kanye ne-Alzheimer's phakathi kwezinye izinto ezibangela ukukhubazeka kwenkumbulo, bangazuza ngokungezelelwa yi-coluracetam.
I-Coluracetam powder ilungele abantu abaphethwe ukukhathazeka nokudangala njengoba ikwazi ukukhulisa imizwa nekhono lokubonisana. Le coluracetam inyusa i-acetylcholine ebuchosheni, ethuthukisa inkumbulo futhi igxile. I-Coluracetam yokukhathazeka kuyindlela enhle.
IColuracetam nayo iyisengezo esihle sabantu abahlose ukuthuthukisa umbono. Lesi sengezo sisiza umuntu ukuba abone ngokucacile ngokuthuthukisa umbono, ukuqina okuqinisiwe nokukhanya kukhanya. Kubonwe futhi ukuthuthukisa ukulungisa izinzwa ezibuthakathaka ze-retinal kanye ne-optical.
I-Coluracetam powder noma ifomu layo uketshezi yisengezo esihle kakhulu sabafundi. Iyakwazi ukuthuthukisa ukuqonda kanye nokushaya ucingo mahhala ngakho-ke kungathuthukisa ukusebenza.
Abakhi bomzimba abashiywanga ngaphandle ngoba lokhu okungeziwe kungasiza emisebenzini yokuzijabulisa ethuthukisa ukuphumula nokwakha umzimba.
Ungayithenga kuphi iCururacetam?
I-Coluracetam iyathengiswa litholakala kalula online. Uma ucabanga ukuthenga i-coluracetam kuyathengiswa noma ukusetshenziselwa wena, hlola ngokucophelela abathengisi abanobuhle online. Njengoba lokhu kuyisengezo esisha esingenabuningi izinkampani eziningi ezinikezela nge-coluracetam ukuthi ithengiswe ngakho-ke zingakwazi ukukhetha kalula kwezinye izindlela ezitholakalayo.
UColuracetam uyilungu elisha lomndeni we-racetam futhi uthole ukuthandwa ngenxa yekhono lokwenza umsebenzi wokuqonda, kanye nokwenza ngcono iso.
Indlela eyinhloko yokusebenza kwe-coluracetam ngokusebenzisa ithonya inqubo ephezulu yokuqalwa kokuhlangana (i-HACU). Lokhu kwenza kube okwehlukile futhi okuvelele phakathi kwezinye izinhlanga njengoba i-phenylpiracetam kuphela enomatshini ofanayo.
Iqiniso le ndaba ukuthi imizimba yethu ayenzi i-Coluracetam ngokwemvelo. Ngakho-ke, uma umuntu ezothola izinzuzo ze-coluracetam kuzofanela ukuthi aqhamuke ezithaselweni.
Yize kungukuhlolwa okulinganiselwe komuntu kubhalwe phansi maqondana nezinzuzo, inani elihle labantu selizamile futhi labika izinzuzo ezithile.
I-Coluracetam yokudangala nokukhathazeka kuye kwabikwa esivivinyweni somtholampilo futhi lokhu kwenza kube yikhandidethi elihle lokuqhubeka nokuqhubeka nezifundo ukuqinisekisa izinzuzo ezishiwo.
Ngenxa yezifundo zabantu ezilinganiselwe nalesi sengezo, imiphumela emibi engenzeka ayichazeki kahle, noma kunjalo, ikhanda elibuhlungu liyinkinga evamile ngama-racetams.
I-sturing coluracetam enomthombo we-choline iyelulekwa ukuthi isuse imiphumela eyenzeka ngenxa yokushoda kwe-choline njengokulimala kwekhanda. Isitaki esinjalo sihlanganisa i-coluracetam alpha GPC isitaki ne-coluracetam CDC choline stack.
I-Coluracetam iyinhlangano ehlanganisela amanzi-encibilikayo ngakho-ke ukuze ukungena kalula kumaseli kufanele kuthathwe ngamafutha / uwoyela onempilo njengamafutha kakhukhunathi angatholakali, noma owoyela obengeziwe bezintombi zomnqumo.
IColuracetam ibeka kahle namanye ama-racetam futhi ezinye izithasiselo. Izibonelo zezitaki ezinjalo ze-coluracetam isitaki se-coluracetam oxiracetam kanye ne-coluracetam fasoracetam stack. Lokhu kunikeza ithuba lokuqhubeka nokucwaninga ku-coluracetam neminye imikhiqizo. I-Coluracetam ene-noopept ingaba yinhlanganisela enokwenzeka yokuthuthukisa inkumbulo nomsebenzi wokuqonda.
Ngaphezu kwalokho, i-coluracetam njengakwamanye ama-racetam inyusa amazinga e-acetylcholine ngenkathi i-choline ewohlokayo ibonwa. Lokhu kwenza ukufaka i-coluracetam ngomthombo omuhle we-choline njenge-coluracetam Alpha GPC stack.
Izilingo zomtholampilo ezinqunyelwe zikhona ukuze kuqinisekiswe izinzuzo ze-coluracetam ngokuqhubekayo ngokwengeziwe okuhlangenwe nakho komuntu siqu kwe-coluracetam kusikisela izinzuzo ezingaba khona. Lokhu kukhombisa ukuthi ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuqinisekisa lezi zinzuzo.
IBrainCells Inc. ivaliwe yingakho i-coluracetam ivulekile ukuthola amalayisense ukuze kuqhubeke izivivinyo zokwelashwa.
Ukusebenzisana kweColuracetam nezinye izidakamizwa nakho kuyindawo edinga ukuqhubeka nezifundo.
Akaike A, et al. (1998). Umphumela wokuvikela we-MKC-231, inoveli ephezulu yokuxhumana ethola isithuthukisi, ku-glutamate cytotoxicity kuma-cortical neurons akhulisiwe. UJpn J Pharmacol.
UBessho, T., Takashina, K., Tabata, R., Ohshima, C., Chaki, H., Yamabe, H., Egawa, M., Tobe, A., & Saito, K. (1996). Umphumela wenoveli yokuhlangana okuphezulu kwe-choline ethola isithuthukisi 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro [2,3-b] quinolin-4- yl) i-acetoamide ekushodeni kokufundwa kwe-maze yamanzi kumagundane. I-Arzneimittel-Forschung, 46(4), i-369-373.
UMurai, S., Saito, H., Abe, E., Masuda, Y., Odashima, J., & Itoh, T. (1994). I-MKC-231, i-choline yokuhlaziya i-choline, igcizelela ukusilela kwememori yokusebenza futhi inciphise i-hippocampal acetylcholine eyenziwe nge-ethylcholine aziridinium ion kumagundane. Ijenali yokudluliselwa kweNeural, 98 (1), 1 - 13.doi: 10.1007 / bf01277590.
UShirayama, Y., Yamamoto, A., Nishimura, T., Katayama, S., & Kawahara, R. (2007). Ukuvezwa okwalandela kokutholwa kokutholwa kwe-choline MKC-231 kuphikisana nokushoda kokuziphatha okubangelwa yi-phencyclidine nokuncipha kwama-septal cholinergic neurons kumagundane. I-European Neuropsychopharmacology, 17 (9), 616-626. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2007.02.011.
IBrainCells Inc. Imemezela Imiphumela Yesivivinyo Sesigaba Sokuhlola 2a se-BCI-540Igcinwe kuNovemba 21, 2011, eMshinini weWayback.
INDAWO YOKUQHAWULA KAKHULU ye-ColURACETAM (135463-81-9)
Ukubuka konke kwe-1.Coluracetam
3.Coluracetam indlela yokusebenza
I-5.Coluracetam Vs aniracetam, i-fasoracetam, i-pramiracetam nePiracetam. Uyini umehluko?
Umthamo we-6.Coluracetam, Stack, Supplementation
7.Side Imiphumela & Ukuxhumana
9. Ngubani ongasebenzisa i-coluracetam?
10.Kungathengwa ini Coluracetam?